နောက်ခံများ, HD (3D, AMOLED, သဘာဝတရား & ပို) | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » နောက်ခံများ, HD (3D, AMOLED, သဘာဝတရား & ပို)
နောက်ခံများ, HD (3D, AMOLED, သဘာဝတရား & ပို) APK ကို
သင်အမြဲသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်တစ်ဦးလှပသောနောက်ခံပုံများသေချာစေရန်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အေးမြနောက်ခံပုံများစုဆောင်းခြင်း။ SetAsWall app ကိုအတူကမြင့်မားသောအရည်အသွေးဝေါလ်ပေပါနှင့် background.Features ရှာဖွေသတ်မှတ်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်:
- နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ခံပုံများနေ့စဉ် Get
- Full HD ကိုအရည်အသွေးကိုနောက်ခံနောက်ခံပုံများ
- Bookmark သင်အကြိုက်ဆုံးနောက်ခံပုံများ
- သတ်မှတ်မည်, download, အမှုနှုန်းနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူချက်ချင်းဝေမျှ!
- ရှာဖွေရေး option နဲ့အတူမည်သည့်ဝေါလ်ပေပါကိုရှာဖွေရလွယ်ကူ။
- newset Browse, လူကြိုက်များနှင့်အသုံးပြုသူ rated နောက်ခံပုံများ။
- ကောင်းပြီကလွယ်ကူသင်တို့ကိုရွေးကောက်ရန်အဘို့အစေ categororized ။
သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်အေးမြ HD ကိုနောက်ခံနောက်ခံပုံများ Get, ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်! သင့်ဖုန်းရဲ့ home screen ကိုဤဓာတ်ပုံများကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ဝေါလ်ပေပါကို lock နိုင်ပါတယ်။ categories 3D, AMOLED, Abstract, သဘာဝတရား, Solid အရောင်များ, ရှုခင်း, ကားများ, ပန်းပွင့်, အစားအစာ, ပစ္စည်း, အနည်းဆုံး, အနား, အားကစားနှင့်များစွာသောပိုပြီးပါဝင်သည် ...
Samsung, LG, Huawei Xiaomi က, Motorola, Sony, HTC, Lenovo ကနှင့်အခြားဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် optimized ပုံရိပ်တွေ။
ဓါတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ: သင်နောက်ခံပုံအဖြစ်ထုံးစံဓာတ်ပုံများသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုတောင်းဆိုနေတဲ့။
5.43 ကို MB
Aron ရှိမုနျကို says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2017 မှာ 1: 14 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဒါကိုကြိုက်တယ် !
မေလ 1, 2017 မှာ 10: 56 ညနေ
Awesome ကို apps များ